I-Semalt: 6 Amathuluzi Okudweba Iwebhu Ukuthola Idatha Ngaphandle Kwekhodi
Kusukela lapho i-Inthanethi iqala ukukhula ngokuphathelene nekhwalithi yesimo nobukhulu, amabhizinisi ase-intanethi, abacwaningi, abathanda idatha kanye nabahleli baqale ukufuna amathuluzi okukhipha idatha kusuka kumawebhusayithi ahlukene amakhulu nezincane. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukukhipha idatha kusukela ekuqaleni noma ube neprojekthi esekelwe ucwaningo, lawa amathuluzi we-web scraping azothola ulwazi kuwe ngaphandle kokufaka ikhodi.
1. I-Hub yokukhwabanisa:
Ukuba isandiso esidumile se-Firefox, i-Outwit Hub ingalandwa futhi ihlanganiswe nesiphequluli sakho se-Firefox. Kuyinto yokwengeza enamandla ye-Firefox evezwe ngamakhono amaningi okukhwabanisa iwebhu. Ngaphandle kwebhokisi, inezici ezithile zokuqashelwa kwamaphoyinti wedatha ezothola umsebenzi wakho masinyane futhi kalula. Ukukhipha ulwazi kusuka kumasayithi ahlukene nge-Outwit Hub akudingi amakhono okuhlela, futhi yilokho okwenza leli thuluzi likhethe kuqala abantu abangewona izinhlelo nabangewona ezobuchwepheshe. Akusizi mahhala futhi isebenzisa kahle izinketho zayo ukuze kukhishwe idatha yakho, ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi.
2. I-Web Scraper (i-Chrome Extension):
Kuyinto evelele yesofthiwe ye-web scraping yokuthola idatha ngaphandle kokufaka ikhodi. Ngamanye amazwi, singasho ukuthi i-Web Scraper iyindlela ehlukile kuhlelo lwe-Outwit Hub. Itholakale kuphela kubasebenzisi be-Google Chrome futhi isivumela ukuthi sihlele izindawo zokubeka ukuthi amasayithi ethu kufanele ahambe kanjani. Ngaphezu kwalokho, izokhipha amakhasi ahlukene ewebhu, futhi imiphumela itholakala ngefomethi yamafayela e-CSV.
i-Spinn3r iyinhlangano ekhethiwe kubalimi nabangewona izinhlelo. Ingaxhuma wonke amabhulogi, iwebhusayithi yezindaba, iphrofayli yezokuxhumana nabantu kanye nokunikezwa kwe-RSS kubasebenzisi bayo. I-Spinn3r isebenzisa ama-Firehose APIs ukuphatha ukukhwabanisa kwe-indexing kanye nokubhula iwebhu ku-95%. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo lusenza sikwazi ukuhlunga idatha ngokusebenzisa amagama angukhiye athile, azokhipha umkhiqizo ongakusiza ngesikhathi.
4. Okuhamba phambili:
I-Fminer ingenye yesofthiwe ye-web scraping ehamba phambili kunazo zonke, elula kakhulu futhi ewusizo yomsebenzisi kwi-intanethi. Ihlanganisa izici ezinhle kunazo zonke zomhlaba futhi idumile kabanzi ngedeshibhodi yayo ebonwayo, lapho ungabuka khona idatha ekhishwe ngaphambi kokuthi igcinwe i-hard disk. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukumisa idatha yakho noma ube nemiklamo ye-web crawling, i-Fminer izosingatha zonke izinhlobo zemisebenzi.
Dexi.io udumile uhlelo lokusebenza olusekelwe kuwebhu nolwazi lwedatha. Akudingi ukuba ulande isofthiwe njengoba ungenza imisebenzi yakho ku-intanethi. Ngempela isofthiwe esekelwe kwisiphequluli esivumela ukuthi silondoloze ulwazi olufakwe ngqo ku-Google Drayivu namapulatifomu we-Box.net. Ngaphezu kwalokho, ingathumela amafayili akho kumafomethi we-CSV ne-JSON futhi isekela idatha yokukhipha ngokungaziwa ngenxa yesiphakeli sayo se-proxy.